MBS | My Burmese Blog
Posts Tagged: MBS	5 Anniversary Of Myanmar Bloggers Society’s Seminar
On September 9, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Blogging	မနကျဖွနျ စကျတငျဘာ ၁၀ ရကျနမှေ့ာ ကြှနျတျောတို့ Myanmar Bloggers Society ကနေ ဦးဆောငျလုပျမယျ့ seminar တဈခုကို Info-Tech မှာ ပွုလုပျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲက MBS ရဲ့ ၅ နှဈပွညျ့ အထိမျးအမှတျ အနနေဲ့ ပွုလုပျတဲ့ ပှဲလဲဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ မြား လမျးကွုံခဲ့ရငျဖွဈဖွဈ အားရငျဖွဈဖွဈ ကွှရောကျပေးဖို့ ဖိတျကွားအပျပါတယျ။ Blogging, MBS	Myanmar Bloggers Gathering
On August 24, 2011	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Blogging, Personal	လှနျခဲ့တဲ့ ရကျတှထေဲက တဈရကျမှာ မတှတေ့ာကွာတဲ့ ပွညျတှငျးက ဘလော့ဂျဂါ မောငျနှမတှေ ပွနျစုစညျးဖွဈကွပါတယျ။ ကှနျြတျောတို့ အနနေဲ့ မတှဖွေ့ဈတာလဲ ကွာတာတဈကွောငျး Blog Day 2011 ကို နီးလာတာကလဲ တဈကွောငျးကွောငျ့ အထိမျးအမှတျပှဲမြိုးလေး လုပျဖို့ အစီအစဉျဆှဲကွဖို့ပါပဲ။
Blog, Blogging, MBS, Personal	Continue Reading
Plan for Blog Day 2008
On August 26, 2008	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Blogging	ဒီလ 31 ရက်နေ့မှာ Blog Day နေ့ ရှိပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ နီးလာပါပြီ.. ကမ္ဘာအနှံ့က ဘလော့ခ်ဂါပေါင်းများစွာက အဲဒီနေ့မှာ သူတို့ နှစ်သက်ရာ ဘလောခ့်အသစ်5ခုကို မိတ်ဆက်ပို့စ် ရေးကြမှာပါ။ Blog Day နှစ်စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဒီနှစ်နဲ့ ဆိုရင် ၄ နှစ်မြောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ် အတွက် ဘလော့ခ်5ခု ရွေးပြီး ပို့စ်တင်ရဦးမှာပါ။ မနှစ်က Blog Day 2007 တုန်းကတော့ ကျွန်တော် မြန်မာ ဘလောခ့် ၂ ခု အပါအ၀င် ဘလောခ့်5ခု အကြောင်းပို့စ် တင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော် ရွေးခဲ့တဲ့ ဘလောခ့်တွေမှာ5ခုလုံးက ဘလောခ့်ဂါတွေ လာဖတ်ကြတော့ အဆင်ပြေအောင် ဘိုလို မတတ်ဘဲ တတ်သလောက် လျှောက်ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်တော့ ကျွန်တော်ရွေးမယ့် ဘလောခ့်ပိုင်ရှင်တွေက လာကြည့်မှာမဟုတ်တဲ့ အတွက် မြန်မာလိုပဲ ရေးပါမယ်။
Blogging, MBS	Continue Reading
Myanmar Blogger Society Network
On August 12, 2008	by Htoo Tay Zar	With	4 Comments	- Blogging	Myanmar Blogger Society Network ကို join ဖို့ ကိုညီလင်းဆက် ပို့ထားတဲ့ အီးမေးကို မနေ့ညက ဖတ်ရပါတယ်.. ဖတ်ပြီးပြီးချင်း အဲဒီမှာ အကောင့်သွားလုပ်လိုက်ပြီး လျှောက်ပတ်ကြည့်ပါတယ် အသိတွေ၊ အမျိုးတွေ အများကြီးမို့ အားလုံးကို လိုက်ပြီး add ရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ကိုလည်း လာရောက် ပူးပေါင်းဖိတ် ဘလောခ့်ကနေ ဖိတ်ပါတယ် ခင်ဗျား… View my page on Myanmar Blogger Society
Blogging, MBS	Bloggers Friends Updated
On October 27, 2007	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Blogging, web sites	ကိုစိုင်းလားရှိုး
Technorati Tags: myanmar bloggers, bloggers, myanmar blogger society, friends, mbs
MBS	Blog Day 2007
On August 31, 2007	by Htoo Tay Zar	With	4 Comments	- Blogging, tag	Happy Blog Day ပါ။ ဒီနေ့ 31 August ဘလော့ခ်ဒေး အတွက် နှစ်သက်တဲ့ ဘလော့ခ်ဂါ ၅ ယောက်ရွေးထားပါတယ်။ သူတို့တွေက –
He is one of my favorite blogger from Malaysia (I think). He wrote about technology, blogging, funny and other.. I try to write posts like him. Sometimes I translated some of his useful posts.
He isablogger from my country Myanmar (Burma). He worte about computer, technology and other tips & tricks. I also like CMS Blog. He is alsoaone of my favorite Myanmar Bloggers. I always ask him if i gotacomputer problem. Everytime I used internet I always read his blog and subscribe feed from blog.
Myo Kyaw Htun is also my favorite blogger from Myanmar (Burma). He said “He isaprogrammer studies web development”. He wrote about web development, blogging, tutorials and some cool stuffs. I always ask him when i have blogging problems. I subscribe feed from him to read new posts from blog.
Sharing the life isaone of my fav blog. I try to search information of latest technology. I think this blogger crazy latest cars. Aniway, I like that blog.
If I’ve got ani blogging problems, I always try to solve by one blog. That blog is tips for new bloggers. That blog isauseful blog for newbie blogger like me. You’ll see blogging tips and information about many widget there.
သူတို့ ၅ ယောက်က ကျွန်တော်အမြဲ အင်တာနက်သုံးတိုင်း ကြည့်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရေးတာက ၅ ယောက်လုံးများသော အားဖြင့် ကွန်ပျူတာနှင့် နည်းပညာ အကြောင်းကို အဓိကထားရေးကြတယ်။ ကျွန်တော်သူတို့ကို အားကျတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့လို ရေးဖို့လည်းလိုက် ကြိုးစားကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်က ဘာမှတော့ မတတ်ပါဘူး။ သင်တန်းတက်ဖို့လည်း မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို အင်တာနက်ကနေ ရှာဖတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်သိသလောက် ပြန်ရေးပါတယ်။ စာဖတ်သူလည်းဖတ်လို့ရမယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ့်ဘာသာရှာဖတ်ရင်းနဲ့ အကျင့်လုပ်ကြည့်တာပါ။ မသိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်တော့ ကျွမ်းကျင်သူတွေ လိုက်မေးယူရတာပါပဲ။ သင်တန်းတက်ဖို့ မတက်နိုင်လို့ self learning လုပ်ဖို့ အတွက် အဓိကထားပြီး ဘလော့ခ် လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်အတွက်တော့ သူတို့ ၅ ယောက်က မြင်ဆရာတွေပါပဲ။ သူတို့ဘယ်မှာနေလဲ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ သူတို့ အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ သူတို့တွေကို မမြင်ဖူးပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ပို့စ်တွေက တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူတို့တွေ အမြဲ ဘလော့ခ်ေ၇းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Happy Blog Day 2007 !!
Tag : www.technorati.com www.blogday.org
Technorati tags:3l0g day, blog day from myanmar, blogger day, blogday2007, blogging
BlogDay, Blogging, MBS	MBS Logo
On August 8, 2007	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Image, tayzar's diary	Myanmar Blogger Society အတွက် logo လေး ကျွန်တော်တတ်သလောက် ဆွဲထားပါတယ်။ ဝေဖန်ပေးပါဦး။MBS ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးသုံးလုံးကို မညီညာတဲ့ frame လေး ၃ ခု နဲ့ လုပ်ထားတာက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဘလော့ခ်ဂါတွေက မတူညီတဲ့ အရပ်ဒေသတွေ၊ ခြားနားတဲ့ အသက်အရွယ်တွေ၊ ကွဲပြားတဲ့ အမြင်တွေ ရှိကြပေမယ့် အတူတကွ ကျွန်းကို ကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကို ကျွန်းမှီ စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိကြတယ်ဆိုတာကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ M လေးရဲ့ အပြာရောင်လေးက မြန်မာဘလော့ခ်ဂါတွေ အေးချမ်းစွာ ပေါင်းစည်းမှုကို ဆိုလိုပါတယ်။ B ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင်လေးက ကျွန်တော်တို့ဟာ အဖွဲအစည်းဟာ ပရဟိတ အတွက် ရည်ရွှယ်ပါတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ S ဆိုတဲ့ အနီရောင်လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့က ရဲရင့်ပြီး နိုင်ငံကို အမိနိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အဓိပါယ်ကို ဆိုလိုပါတယ်။
Logo နှင့် ဆောင်ပုဒ် ရွေးချယ်မှု အစီအစဉ်ကို ကိုနေဘုန်းလတ် ဘလော့ခ်မှာ အသေးစိတ် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
MBS	Recent Posts